10-ka Majaajiliiste ee ugu mushaarka badan aduunka 2022 | Shaqooyinka
Bogga ugu weyn Top 10 Majaajilaystayaasha Ugu Mushaarka Badan Adduunka
Isha sawirka: www.alamy.com
Majaajilada waa qaab farshaxan oo la jecel yahay laakiin adag. Waxaad si fiican u ogtahay inay ka sahlan tahay in la ooyo intii la qosli lahaa. Dadka badankoodu waxay rabaan inay qoslaan, ee ma ooyaan. Taasi waa waxa ka dhigay majaajilada si dhaqso ah u koraya madadaalada. Isla sababta ay qaar ka mid ah majaajilaystayaasha ugu mushaharka badani ay uga mid yihiin kuwa caanka ah ee ugu mushaharka badan.
Majaajilada ayaa ah nooca loo yaqaan podcasting -ka ugu caansan, oo ay ku xigto waxbarasho iyo warar sida uu qabo Edison Research Infinite Dial 2020 ee PodcastInsights. Waxay leedahay qiyaastii 14.6% wadarta filimada la abuuray maalmahan casriga ah.
Majaajilada sida warshadaha iyada oo loo marayo qaabab kala duwan sida filimada, bandhigyada TV-ga, podcast-ka, maqalka, YouTube-ka, majaajilada, masraxa, iwm.
Inta badan majaajileystayaasha ugu qanisan ayaa dhaafay waqtigoodii ugu fiicnaa ama hadda firfircoon. Majaajileystayaasha ugu mushaharka badan ee hadda shaqeeya ayaa isbarbar dhig ku ah oo laga yaabaa inaysan ka dhex muuqan kuwa ugu taajirsan.
Tusaale ahaan, halka Jerry Seinfield, oo 63 jir ah, uu weli yahay majaajiliistaha ugu taajirsan, Kevin Hart, oo 39 jir ah, ayaa hadda ah majaajiliistaha ugu mushaarka badan.
Sidaa darteed, qoritaankan, waxaan xoogga saari doonnaa majaajilaystayaasha ugu mushaharka badan 2021 marka loo eego kuwa ugu taajirsan.
Waxaan ku bilaabi doonaa su'aalaha qaarkood sida kuwa soo socda oo laga yaabo inaad hadda isweydiiso.
Ma jiraa majaajileyste bilyaneer ah?
Haa, waxaa jira majaajiliisteyaal bilyaneer ah laakiin ma badna. Jerry Seinfield ayaa laga yaabaa inuu yahay majaajiliistaha kaliya ee bilyaneerka ah. Sababtu waxay noqon kartaa majaajiladaas oo ah wershedaha oo dhawaan uun soo baxay.
Iyada oo ah nooca lacag -bixinta baruurta majaajilaystayaashu hadda helaan, waxaa jiri doona wax badan oo ku jira liiska majaajiliistayaasha bilyaneerka ah mustaqbalka dhow.
Waa kuma majaajiliistaha madow ee ugu taajirsan?
Kevin Hart, oo ah majaajiliiste 39 jir ah ayaa ah majaajiliistaha madow ee ugu taajirsan.
Wuxuu caan ku noqday filimada sida Ride Along, Jumanji: Ku soo dhowow Jungle, iyo Minions: Rise of Gru, laakiin mar walba sidaas ma ahayn.
Muddo dheer ka hor inta uusan ka soo muuqan shaashadda weyn ee ku xigta saaxiibkii Dwayne “The Rock” Johnson, Hart wuxuu isku dayayay inuu magac u yeesho sidii majaajiliiste taagan oo falalkiisii ​​ugu horreeyay si fiican uma socon.
Wuxuu hadda ku fadhiyaa US $ 200 milyan waxaana loo tixgeliyaa majaajiliistaha madoow ee ugu taajirsan xilligan.
Waa kuma majaajiliistaha ugu mushaarka badan 2022?
Majaajiliistaha ugu mushaarka badan sidoo kale waa Kevin Hart. Kaliya maaha majaajiliistaha madow ee ugu mushaharka badan laakiin majaajiliistaha ugu mushaharka badan 2022 koox kasta.
10ka majaajiliistaha ugu mushaharka badan aduunka 2022
Xasuusnoow, liiskani waxa uu ka kooban yahay majaajileystayaasha ugu mushaharka badan oo aan qasab ahayn majaajilaystayaasha ugu qanisan.
Waa qarnigii 21 -aad “King Majaajilo”. Jilaagan iyo majaajiliistaha ayaa nasiibkiisa ka helay xirfadiisa majaajilada ah ee guusha leh. Hart wuxuu caan ku yahay ka soo muuqashadiisa 'Waxaan ahay nin weyn oo weyn' iyo 'Si qosol leh'.
Maanta Hart waa majaajiliistaha 14aad ee ugu taajirsan adduunka waana midka ugu mushaarka badan.
Waad hubin kartaa tan: 10ka Qareen ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka | Xirfadaha Sharciga ee ugu sarreeya sanadka 2022
Seinfeld oo ay weheliyaan Larry David taxanaha telefishanka 'Seinfeld' kaas oo kasbaday guul weyn tan iyo markii ugu horreysay ee laga sii daayay TV-ga.
Wuxuu xiddig ku lahaa dhowr bandhig tan iyo markaas sidoo kale waxaa ka mid ahaa 'Frankie on Benson' iyo 'Showgii Caawa'.
Si kastaba ha ahaatee, maanta wuxuu noqday majaajiliistaha ugu taajirsan adduunka. Markay tahay 64 jir, Jerry Seinfeld qiimihiisa saafiga ahi waa $ 950 milyan.
Jim Gaffigan waa jilaa caan ah, majaajiliiste, qoraa, iyo soo saare. Gaffigan wuxuu leeyahay maadooyin majaajilo badan oo guuleysta sida 'Obsessed', 'Mr. Caalamka ',' Cinco 'iyo' Waqtiga Tayada '.
Wuxuu ku soo barbaaray Indiana oo maaddadiisu caadi ahaan waxay ku saabsan tahay aabbanimada, cuntada, caajiska, iyo fiirinta.
Laga bilaabo 2021, qiimaha Jim Gaffigan waa qiyaastii $ 30 milyan. Wuxuu ka mid yahay majaajilaystayaasha ugu mushaarka badan.
4. Trevor Nuux:
Trevor Noah waa majaajiliiste u dhashay Koonfur Afrika, jilaa, martigeliye telefishan, iyo raadiyaha DJ oo leh hanti dhan $ 100 milyan.
Ka dib markii uu magac ku yeeshay wareegga majaajilada istaagga ee caalamiga ah, Nuux wuxuu ku qaatay nasasho weyn Ameerika markii uu noqday martigeliyaha Comedy Central's “The Daily Show” oo ku yaal Jon Stewart.
Waa majaajiliiste kale oo ugu mushaarka badan.
Waa majaajiliiste Mareykan ah oo taagan, qoraa, iyo jilaa leh hanti dhan $ 16 milyan.
Sidoo kale, akhri tan: 13 Shaqooyin Online Degdeg ah oo Fudud oo loogu talagalay Ardayda Kulliyadda 202 -ka2
Gabriel Iglesias waa jilaa Mareykan ah, majaajiliiste ah, iyo qoraa leh hanti dhan $ 40 milyan.
Iglesias waa majaajileyste taagan oo aad u guulaystay oo dalxiis ku mara dalka oo dhan, isagoo u istaagaya in la iibiyo dad badan oo taageerayaal u heellan.
Waxa kale oo uu sii daayay tikniko gaar ah oo majaajillo ah, dhawaanahan Netflix, halkaas oo uu sidoo kale yahay xiddigga sitcom -ka.
Laga soo bilaabo 2021, qiimaha saafiga ah ee Amy Schumer waxaa lagu qiyaasaa $ 25 milyan.
Amy Beth Schumer waa majaajiliiste iyo jilaa Mareykan ah oo taagan. Schumer wuxuu ku mashquulsanaa majaajilada horraantii 2000 -meeyadii ka hor inta uusan u muuqan inuu yahay tartame xilli shanaad ee taxanaha Tartanka dhabta ah ee NBC ee Comic Standing Last 2007.
Schumer ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inay tahay jilaa cajiib ah, waxay ku jirtay filimo sida 'Snatched' iyo 'I Feel Pretty'.
Waxay ka gashay liiska majaajiliistayaasha ugu mushaarka badan adduunka.
Terry Fator waa ventriloquist Mareykan ah, majaajiliiste, iyo heesaa oo sameyn kara in ka badan 100 iska -yeel -yeel.
Wuxuu caadiyan u adeegsadaa 16 kabo oo kala duwan falalkiisa waana mid ka mid ah majaajilaystayaasha ugu mushaarka badan adduunka.
Laga bilaabo 2021, qiimaha saafiga ah ee Terry Fator waa qiyaastii $ 160 milyan.
Jeff Dunham waa majaajiliiste Mareykan ah iyo hal -ku -dhegle oo ka mid ah majaajilaystayaasha ugu mushaarka badan adduunka. Dunham wuxuu ka qaataa meel kasta $ 15 - 30 milyan sanadkii.
Laga soo bilaabo 2021, hantida saafiga ah ee Jeff Dunham waa qiyaastii $ 140 milyan.
10. Casiis Ansaari:
Laga soo bilaabo 2021, qiimaha Aziz Ansari wuxuu ku dhow yahay $ 20 milyan.
Aziz Ismail Ansari waa jilaa Mareykan ah, soo saare, qoraa, agaasime, iyo majaajiliiste ka yimid Columbia. Waxaa lagu yaqaanay doorkiisa NBC 'Park iyo Madadaalada' iyo 'Master of None'.
Wuxuu ku guuleystay dhowr abaalmarinno jilitaan iyo qoris waxqabadkiisii ​​taxanaha. Aziz wuxuu noqday jilaagii ugu horreeyay ee Hindi Mareykan iyo Aasiya ah ee ku guuleysta dahabka dahabka ah ee jilitaanka telefishanka. Cajiib!
Isagu waa majaajiliiste ugu mushaharka badan adduunka liiskayaga.
Akhri: Waa kuma YouTuber -ka ugu Lacagta Badan |
Majaajileystayaasha ayaa mar loo tixgeliyey inay ka soocan yihiin jilayaasha iyo dadka caanka ah ilaa dhowaan. Xitaa waxaa loo eegay sidii qoolley. Laakiin, taasi hadda way is beddeshay.
Dhalinyaro badan oo karti leh ayaa soo galaya qeybtaan faa'idada leh qaab jilaayaal ama majaajileystayaal taagan. Waxay u baahan tahay hibo dhab ah si aad si guul leh garoonka ugu sii jirto maadaama ka qoslinta dadka kale aysan ahayn dadaal micno leh.
Dabcan, si fiican baa loo siiyaa oo majaajilaystayaasha ugu mushaharka badan ayaa ka dhex muuqda kuwa ugu sarreeya iyo fannaaniinta xirfadda leh.
Kahor intaan farsamadu bilaabin inay isbeddel degdeg ah ku keento bulshada, ma heli kartid shaqo shahaado la'aan. Xaqiiqdii, shaqooyinka…
Lacag aad u badan dhammaadka bisha ayaa laga yaabaa inay lawska noqoto markaad jabiso…